​बन्द हुँदै गुगल प्लस !
काठमाडौं । इन्टरनेट जाएन्ट गुगलले आफ्नो सोसल नेटवर्किङ्ग प्लाटफर्म गुगल प्लस बन्द गर्ने भएको छ । गुगल प्लसको सपोर्ट पेज अपडेट गर्दै गुगलले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
गुगलका अनुसार गुगल प्लसको दोस्रो संस्करण अर्थात् कन्जुमर भर्सन टू आगामी अप्रिल २ बाट....
यस्तो छ एनसेलको ‘भ्यालेन्टाइन अफर’
काठमाडौं । नजिकिँदै गरेको भ्यालेन्टाइनलाई लक्षित गरि एनसेलले ‘भ्यालेन्टाइन अफर’ ल्याएको छ । उक्त अफर प्रयोग गरि एनसेलका ग्राहकले यस भ्यालेन्टाइन सिजनमा आफ्ना प्रियजनसँग सुलभ दरमा असिमित कुराकानीको मजा लिन सक्नेछन् ।
अफरअन्तर्गत ग्राहकले आफुले छानेको एउटा विषेश एनसेल नम्बरमा मात्र ५०....
तोकिएको सेवा नदिए इन्टरनेट र टेलिफोनले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने !
काठमाडौं । तोकिएको सेवा दिन नसके इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाप्रदायकहरूले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले....
​फेसबुकले म्यान्सेजरलाई इन्स्टाग्राम र ह्‍वाट्सएपसँग मर्ज गर्ने
न्यूजलय शनिबार १२, माघ २०७५
काठमाडौं । सबैभन्दा ठूलो सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकले आफ्ना प्रमुख म्यासेजिङ उत्पादनहरूलाई मर्ज गर्ने भएको छ ।
फेसबुकले म्यासेन्जरलाई ह्‍वाट्सएप र इन्स्टाग्रामसँग मर्ज गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । वृहद् म्यासेजिङ इकोसिस्टम निर्माण गर्न फेसबुकले यो कदम चालेको न्युयोर्क टाइम्सले....
​सावधान, टिकटकबाट यस्तो छ खतरा
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल ‘टिक टक’ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । १५ सेकेन्डसम्मको भिडियो बनाउन मिल्ने यो एपमा गीत र संवादमा अभिनयसमेत गर्न सकिन्छ । सन् २०१६ देखि चीनबाट सुरु भएको टिक टकले अहिले घरघरै कलाकार जन्माएको छ । अभिनय देखाउने माध्यम बनेको छ ।
​सञ्‍चारमन्त्री बाँस्कोटा र नेपाल टेलिकमविरुद्ध मुद्दा
न्यूजलय बिहीबार १०, माघ २०७५
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र नेपाल टेलिकमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ।
नेपाल टेलिकमको वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय छाउनीस्थित पुराना ब्याट्री नचलाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटा र टेलिकमविरुद्ध स्क्र्याप....
​फेसबुक मेसेन्जरको नयाँ भर्सन सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता
न्यूजलय बुधबार ०९, माघ २०७५
काठमाडौं । सोसल मिडिया प्लाटफर्म फेसबुकले मेसेन्जरको रि–डिजाइन गरी नयाँ स्वरुपमा लञ्च गरेको छ ।
नयाँ इन्टरफेस तथा अपडेटका साथ पेश गरिएको मेसेन्जरको नयाँ भर्सनलाई एन्ड्रोइड तथा आइओएस प्रयोगकर्ताले गुगल प्ले स्टोर तथा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्दछन् ।
​अब ह्वाट्सएपको मेसेज पाँच पटकसम्म मात्र फरवार्ड गर्न सकिने
न्यूजलय मङ्गलबार ०८, माघ २०७५
काठमाडौं । इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ एप ह्वाट्सएपले विश्वभरका प्रयोगकर्ताका लागि मेसेज फरवार्ड गर्नमा सीमा तय गरेको छ । अब एकजना प्रयोगकर्ताले एउटा मेसेजलाई अधिकतम पाँच पटकसम्म मात्र फरवार्ड गर्न सक्नेछन् ।
फेसबुक स्वामित्वको ह्वाट्सएपमा अहिले प्रयोगकर्ताले २० पटकसम्म मेसेज फरवार्ड गर्न सक्दछन् ।
अब इमेलमा जथाभावी विज्ञापन पठाए एक लाख जरिवाना !
काठमाडौं । अब अनुमति नलिई कुनै खास प्रयोजनका लागि जथाभावी मोबाइल वा इमेलबाट विज्ञापन पठाउन नपाइने भएको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना इमेल वा मोबाइलमा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने भएको हो ।